Tirada dadka loo xiray kiiska kufsiga iyo dilka Xamdi oo korortay - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka Tirada dadka loo xiray kiiska kufsiga iyo dilka Xamdi oo korortay
Tirada dadka loo xiray kiiska kufsiga iyo dilka Xamdi oo korortay
Taliska booliska Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in tirada shaqsiyaadka loosoo qabtay tuhunka la xiriira kiiska kufsiga iyo dilka Muqdisho ay mareyso 11 isla markaana kuwa kale lagu raadjoogo.
Sadiiq Aadan Doodishe, afhayeenka bileyska oo war-fidiyeenka u waramay, ayaa qoyska marxuumad Xamdi Maxamed Faraax ka codsaday in ay is-dejiyaan kana war sugaan natiijada baaritaanka haatan socda.
Baarista ayuu hoosta ka xariiqay in ay si wanaagsan u socoto isla markaana ay rajeynayaan in ay kusoo dhamaato hanaan fiican oo cadaalada lagu marsiinayo dambiileyaashii falkaas foosha xun ku kacay.
“Cid kasta oo haysa xog ku saabsan kiiskaan waxaan ka codsaneynaa in ay nagala shaqeeyaan soo qabashada ragii ku lugta lahaa,” ayuu hadalkiisa kusoo ku daray, isagoo aan saxaafada su’aallo uga jawaabin.
Gaashaanle Doodishe ayaa xaqiijiyey in lasii daayey laba tuhunsane oo ah haween ah “kadib markii maxkamada awooda u leh ay caddeysay in aysan wax xiriir ah la lahayn fal-dambiyeedka dhacay”.
“Balse mar walba oo loo baahdo waxaa lasoo taagi karaan maxkamad,” ayuu ku daray, isagoo ka gaabsaday in uu tafaasiil dheeraad ah ka bixiyo si gaar ah hadii ay damaanad banaanka ku joogaan labadaas ruux.
Xamdi, 19-jir ka qalin-jabisay Dugsiga Sare gashayna Imtixaanka Dowladda, ayaa 11-kii bishan meydkeeda laga helay banaanka Hotel Marwo ee degmada Wabeer. Isbitaalka Madiina wuxuu xaqiijiyey in kufsi loo geystay.
Sidda ay sheegayaan warar horudhac ah, Xamdi ayaa laga soo tuuray dabaqa hotelka oo ah lix biyaano ah. Goobjoogeyaal kala duwan waxay wariyeen in jirkeeda uu ka muuqdo dhaawacyo gaar ahaan dhanka madaxa.
Hadalka taliska booliska ayaa kusoo hagaagaya maalmo kadib markii qoyska marxuumada ay ka cowdeen mas’uuliyiin ay sheegeen in ay cadaalada wiiqayaan isla markaana aysan ku qanacsaneyn qaabka wax u socdaan
Previous articleSomalia: building a stronger primary health care system
Next articleSomaliland: Minister tests positive for COVID-19
(Xog) Ku tagri falka awoodda doorashada oo durba soo shaac baxday & Lafagareen oo xaqiijiyay kursi
(Deg Deg) Dagaal laga cabsi qabo in uu ka dhex dillaaco ciidanka Haramcad & Ciidanka Ahlu Sunna
(Xog) Halista ku soo wajahan ololaha dib u soo doorasho ee Maxamed Farmaajo
(Xog) Ku tagri falka awoodda doorashada oo durba soo shaac baxday & Lafagareen oo...
Wararka Faysal Ali Axmed (Alteeso) - September 29, 2020
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed C/casiis Xasan Maxamed (Lafta-gareen) ayaa shaaciyey in kursi ka mida Baarlamaanka Federaalka ee laga soo doorto K/Galbeed loo gaar yeelay,...
(Deg Deg) Dagaal laga cabsi qabo in uu ka dhex dillaaco ciidanka Haramcad &...
Ciidamada HaramCad oo uu horjooge u yahay Farxaan Qaroole oo aay qaraabo yihiin MW Qoor Qoor oo kaashanaya kuwa Jabuuti ayaa howlgal ammaanka lagu...
Qaar ka mid ah dadka siyaasadda falanqeeya ayaa Dowladda Farmaajo ku dhaliila in tan iyo markii la soo doortay ee 2017-kii aanay qaadan wax...
(Xog) Ku tagri falka awoodda doorashada oo durba soo shaac baxday...
(Deg Deg) Dagaal laga cabsi qabo in uu ka dhex dillaaco...